သင်၏ IT ဌာနကို Firefox သို့ပြောဆိုပါ Martech Zone
သင်၏ IT ဌာနကို Firefox သို့ပြောဆိုပါ
ကြာသပတေးနေ့, ဒီဇင်ဘာလ 4, 2008 တနင်္ဂနွေ, အောက်တိုဘာလ 4, 2015 Douglas Karr
ငါ IT ဌာနများမှလာသောအခါငါအတိတ်ကာလတော်တော်လေးစိတ်ပျက်ခဲ့ထင်ပါတယ်။ ငါပထမ ဦး ဆုံးအလုပ်မှာကွန်ယက်တစ်ခုဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်ဌာန၌ကစားစရာအပေါငျးတို့သကောင်လေးတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့သည် (ထိုအချိန်ကငါ့အဒါရိုက်တာမှလွဲ။ အစဉ်မပြတ်ငါသူ့အဘို့တ ဦး တည်းဝယ်ယူ) ။
စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့်နည်းပညာအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းအမျိုးမျိုးကြားရွေ့လျားခြင်းသည်ကျွန်ုပ်ကိုအိုင်တီတံခါးနှစ်ဖက်စလုံးတွင်နေရာချပေးခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်မည်သို့သိသည် စိတ်ရှုပ်စရာကသင်လိုအပ်တဲ့ကိရိယာတွေမရှိဘူး။ ကူညီပံ့ပိုးရန် ပို၍ ခက်ခဲသော်လည်းနည်းပညာသည်တိုးတက်မှုနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုဆောင်ကြဉ်းသင့်သည်ဟုအခိုင်အမာယုံကြည်သည်။ မင်းကသော့ခတ်ထားတယ်ဆိုရင်အဲဒါကိုမလုပ်နိုင်ဘူး။ ငါ့ရဲ့သူငယ်ချင်းကောင်း Adam Small ဒီနေရာမှာ Indianapolis ရှိ Mobile Marketing ကုမ္ပဏီပြီးပြည့်စုံအောင်လုပ်တယ်။ မင်းရဲ့အိုင်တီဌာနပဲ ဖွင့် မင်းလား ပိတ်ထားသည် သငျသညျ?
ကျွန်ုပ်၏လက်ရှိအလုပ်နှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဘက်သို့ပြန်ရောက်လာပြီးစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအားဖြင့်ကစားရန်ကြိုးစားနေသည်။ သို့သော်မလွယ်ကူပါ။ ငါ့နေ့ကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေသည့်ပြီးပြည့်စုံသောဆော့ (ဖ်) ဝဲ (လ်) အားလုံးကိုကျွန်ုပ်သိသည်။ ၎င်းကိုကျွန်ုပ်မသုံးနိုင်ပါ။ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏သစ္စာရှိသော Mac ထက်ယခုကွန်ပျူတာပေါ်တွင်ပင်ရှိနေပါသည်။ အတော်လေးအဆင်မပြေမှုပါ
ငါစိန်ခေါ်မှုတက်သည်ပေါ့! ငါ (ငါဘလော့ဂ်အပြင်ဘက်) မြည်တမ်းမယ့်အစားငါတတ်နိုင်သမျှအကောင်းဆုံးစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုလိုက်စားပြီးအဲဒီမှာကူညီမယ့်သူကိုရှာတွေ့တယ်။ ကျွန်ုပ်၏အကြီးမားဆုံးကယ်တင်ရှင်တစ် ဦး မှာ Firefox ကိုအသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည်အလွန်ကောင်းမွန်သော browser တစ်ခုသာမကဘဲ add-ons များသည်အလွန်မယုံနိုင်လောက်အောင်များပြားသည်။
FireFTP - ကျွန်ုပ်သည် Firefox တွင်ကျွန်ုပ်တိုက်ရိုက် run နိုင်သည့်စိတ်ကူးကောင်းသော FTP application တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အခမဲ့ (သို့သော် ကျေးဇူးပြု၍ လှူပါ။ လှူဒါန်းမှုအားလုံး၏ထက်ဝက်သည်ပရဟိတလုပ်ငန်းသို့သွားသည်) ။ သူ၌သင်အားကောင်းသော FTP client အတွက်လိုအပ်သမျှရှိသည်။
သစ်ပင် - Twitter client တစ်ခုဖြစ်ပြီး Firefox ၏ sidebar တွင်မှန်ကန်စွာအလုပ်လုပ်သည်။ ဒါဟာသင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင် client ကို run သလိုချောချောမွေ့မွေ့မဟုတ်ပါဘူး မြဝတီ, ဒါပေမယ့်ကလှည့်ကွက်ပါဘူး။ ပြန်ကြားချက်များမှတိုက်ရိုက်မက်ဆေ့ခ်ျများသို့သွားရန်ပိုမိုလွယ်ကူစေရန်သူတို့သည်၎င်းတို့အား tabs အချို့တင်ထားစေလိုသည်။
အရောင်ဇီလာ - ဝက်ဘ်စာမျက်နှာကိုအရောင်ချွတ်ရန်လိုအပ်ပါသလား။ ဒါလုပ်နေတာများအတွက်ဂရိတ်နည်းနည်း tool ကို!
ဟားဟား - သင့်ကိုယ်ပိုင် scripts များကိုစာမျက်နှာများပေါ်တွင်ရေးရန်နှင့်ထည့်ရန်ခွင့်ပြုသည့်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသော add-on တစ်ခု။ gmail နှင့်အခြားအက်ပလီကေးရှင်းများစွာနှင့်သင့်ကိုကူညီနိုင်သည့်စိတ်ဝင်စားဖွယ် GreaseMonkey scripts သန်းပေါင်းများစွာရှိသည်။ ထွက်ခွာသည် နင် နောက်ဆုံးပေါ်အတွက်
UPDATE - CAUTION ကို Greasemonkey ဖြင့်သုံးပါ။ ဘဏ္websitesာရေး ၀ က်ဘ်ဆိုက်များအတွက် login information ကိုရယူရန်ကြိုးစားမည့် scripts များရှိသည်။
အေးအေးဆေးဆေး သင်၏အံ့သြစရာကောင်းသောပျော်စရာ add-on တစ်ခုကသင်၏ကွန်ပျူတာသို့မဟုတ် Mac ကို Media browsing monster အဖြစ်ပြောင်းလဲပေးသည်။
Foxclock - အချိန်ဇယားများကသင့်ကိုရှုပ်ထွေးစေသလော။ ၎င်းသည်သင့်အတွက်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိလက်ရှိအချိန်ကိုထောက်ပံ့ပေးနိုင်သည့်အဆင်သင့်အနည်းငယ်သာထည့်သွင်းထားသည်။
ScribeFire - ဘလော့ဂ်အယ်ဒီတာတောင်မှသင်တင်ပို့နိုင်သည့် XML-RPC ကို သုံး၍ အကြောင်းအရာများတင်ရန်ဘလော့ဂ်ပလက်ဖောင်းအများစုတွင်စံသတ်မှတ်ထားသော Firefox သို့ထည့်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်ဤအရာကိုမသုံးပါ။ ကျွန်ုပ်သည် WordPress ရှိ ol 'editor နှင့်ကပ်လေ့ရှိပြီး၊
ဤအပိုင်း၏အကောင်းဆုံးအစိတ်အပိုင်းမှာသင်၏ add-ons များကိုဒေသအတွင်းထည့်သွင်းရန် administrator အခွင့်အရေးများကိုသင်ပုံမှန်အားဖြင့်မလိုအပ်ခြင်းဖြစ်သည်၊ ထို့ကြောင့်သင်၏ IT ကောင်လေးအားမချန်မထားဘဲထူးချွန်သောကိရိယာများကိုသင်၏စွန့်ပစ်မှုတွင်ထားနိုင်သည်။ သင်၏ IT ယောက်ျားများကိုယနေ့ Firefox ကို install လုပ်ပါ။ အကယ်၍ Firefox သည်သင့်ကိုစတင်တိုက်ခိုက်လာပါကသင်၏ IT help desk ကိုမခေါ်ပါနှင့်…ဒီ add-ons အချို့ကိုစတင်ဖယ်ရှားလိုက်ပါ။
Tags: add-ons တွေကိုAdobefirefox ကိုFirefox add-ons တွေကိုစျေးကွက်ရှာဖွေရေး add-ons တွေသတင်းပို့
ယခုတနင်္ဂနွေ - Indianapolis Startup Weekend
4:2008 pm တွင်ဒီဇင်ဘာလ 9, 26 တွင်
ကုန်ထုတ်စွမ်းအားကိရိယာများ၏ အတုအယောင် cornucopia။
4:2008 pm တွင်ဒီဇင်ဘာလ 9, 50 တွင်
အိုကေ… ဒါကို ထပ်စမ်းကြည့်မယ်…. noscript သည် သင့်ဆိုဒ် btw ကို အမှန်တကယ် ဝက်ခြံဖြစ်စေပါသည်။ marketingtechblog.com ကို ခွင့်ပြုထားပေမယ့် အဲဒါက မလုံလောက်ပါဘူး။ ကျန်တဲ့ 16 ယောက်ထဲက ဘယ်ဟာကို ခွင့်မပြုဘူးလဲ မသိဘူး။
သို့သော် အခြားဘရောက်ဆာများသည် ActiveX ကိုမပံ့ပိုးမချင်း၊ IE သည် IT ဌာနများတွင် အမြဲတမ်းခြေတလှမ်းရှိမည်ဖြစ်သည်။
4:2008 pm တွင်ဒီဇင်ဘာလ 9, 58 တွင်
ActiveX သည် နှစ်အနည်းငယ်အတွင်း သေဆုံးသွားလိမ့်မည်၊ သို့မဟုတ် အနည်းဆုံး မပြောင်းလဲဘဲ ကျန်ခဲ့သည်… ကျွန်ုပ်၏စကားများကို အမှတ်အသားပြုပါ။ မည်သည့်ဝဘ်အပလီကေးရှင်းမှ တပ်ဆင်ရန်မလိုအပ်ဘဲ Operating System တွင် ဒရိုက်ဘာများကို ထည့်သွင်းပါ။ မလိုအပ်ပါ။
Microsoft သည် Silverlight ၏ လက်လှမ်းမီမှုကို ချဲ့ထွင်ရန် ကြိုးစားနေပါသည်။ Flex/AIR ကဲ့သို့ပင်၊ Silverlight သည် Microsoft နည်းပညာများဖြင့် ဝဘ်အား desktop အပလီကေးရှင်းများ တည်ဆောက်ရန်အတွက် အဓိက platform ဖြစ်လာမည်ဖြစ်သည်။ Office သည် ဤနည်းဖြင့် စတင်ရောင်းချမည့် ပထမဆုံးသော အဓိကအခန်းဖြစ်လာမည်ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်၏ဆိုက်ကို noscript ဖြင့် တစ်ခါမှ မစမ်းသပ်ဖူးပါ။ client-side scripting က site တစ်ခုဆီ ယူဆောင်လာနိုင်တဲ့ အတွေ့အကြုံကို အခိုင်အမာ ယုံကြည်သူပါ။ ကဲ... 2008 ကို ရောက်ရအောင်
ဒီဇင်ဘာ 5, 2008 မှာ 9: 58 AM
သို့သော် ယခုအချိန်တွင်၊ Active-X သည် နောင်လာမည့်နည်းပညာမှ မလုပ်နိုင်သော အရာများကို လုပ်ဆောင်သည်။
လက်ဗွေဖတ်စက်ဖြင့် ကျွန်ုပ်၏ လုံခြုံသောဆိုက်သို့ အကောင့်ဝင်စေလိုသည်ဟု ဆိုကြပါစို့။ အဲဒါ ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ။ Active-X ထိန်းချုပ်မှု။
ထို့ကြောင့် ၎င်းတို့နှစ်ဦးစလုံးသည် ဘရောက်ဆာကို အားနည်းချက်ဖြစ်စေသည့်တိုင်အောင် သင်သည် လူများ၏စနစ်လမ်းညွှန်များကို ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သည်၊ သို့မဟုတ် ၎င်းတို့သည် Active-X ၏ cross platform အစားထိုးမှုတစ်ခုနှင့် ပေါ်လာသည်... ၎င်းသည် ဆက်လက်တည်ရှိနေမည်ဖြစ်သည်။
4:2008 pm တွင်ဒီဇင်ဘာလ 10, 10 တွင်
ကျွန်ုပ်သည် ops နှင့် IT ကို ဦးဆောင်သည့် ကုမ္ပဏီများတွင် ကျေနပ်နှစ်သက်ခဲ့ပြီး Firefox ကို မူရင်းဘရောက်ဆာ (IE မှာလည်း ရှိနေသည်)။ caviat မှာ ကျွန်ုပ်တို့၏အသုံးပြုသူများသည် အများအားဖြင့် နည်းပညာကို တတ်ကျွမ်းသူများဖြစ်သည်။ သင်သည် ကြီးကြီးမားမား ထိန်းကျောင်းထားသော လုပ်ငန်းတစ်ခုတွင် မဟုတ်ပါက၊ စနစ်လော့ခ်ချမှု အများအပြားသည် အသုံးမဝင်ပေ။ ကျွန်ုပ်၏နည်းပညာများသည် လူတိုင်းကို လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားခြင်းထက် ကျွန်ုပ်၏လူများကို ပိုမိုထိရောက်အောင်မည်ကဲ့သို့ဖြေရှင်းနည်းကို လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေရန် ကျွန်ုပ်၏နည်းပညာများကို ဦးစားပေးစေလိုပါသည်။
ပိတ်ထားတာက ကျောင်းဟောင်း။ မှန်ကန်သော လေ့ကျင့်သင်ကြားမှုနှင့် ပညာရေးသည် တိုးတက်သောကုမ္ပဏီများကို ထိရောက်မှုဖြစ်စေသည်။
့2ဆင့်။
ဒီဇင်ဘာ 5, 2008 မှာ 11: 47 AM
စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းတွေနဲ့ ကစားရင် အရာအားလုံးက လွယ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ရေရှည်အတွက်ကတော့ အမြဲတမ်း အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုပါပဲ။
firefox addons ကောင်းကောင်းစာရင်း။ ကျွန်ုပ်၏ firefox တွင်ဖော်ပြထားသော addons များမရှိပါ။ GreaseMonkey တွင် သင်နှင့်သဘောတူသည်။ စောစောက ပြဿနာတချို့ ကြုံဖူးပြီး အဲဒါမရှိရင် အဆင်ပြေတယ်။
5:2008 pm တွင်ဒီဇင်ဘာလ 5, 50 တွင်
Firefox ကိုသုံးနေတာကြာပါပြီ IE သုံးတဲ့လူအများစုကို တခါတရံမေ့သွားတတ်ပါတယ်။
အပိုပရိုဂရမ်များစာရင်း။ ကျွန်တော်သည် ခဏတာ သူတို့နှင့် သကြားလုံးဆိုင်ရှိ ကလေးတစ်ယောက်လို ဖြစ်နေသောကြောင့် ကျွန်ုပ်၏ add-ons များကို အမှန်တကယ် ကျောခိုင်းခဲ့ရပါသည်။ ကျွန်ုပ်တွင် ရောင်စုံတက်ဘ်များ၊ အလိုအလျောက် အစမ်းကြည့်ရှုမှုများ၊ ဒေါင်းလုဒ်ဘားများ၊ ကိုးကိုက်လုံးရှိသည်။
အချို့သောလူများ၏ Firefox browser များကိုကြည့်သောအခါ ရယ်စရာကောင်းသည်။ ၎င်းတို့၏ မျက်နှာပြင်တစ်ဝက်ကို အပိုပရိုဂရမ် တူးလ်ဘားများဖြင့် သိမ်းထားသည်။
7:2008 pm တွင်ဒီဇင်ဘာလ 9, 59 တွင်
ကျွန်ုပ်၏ (အသစ်မဟုတ်သော) အလုပ်တွင် ကျွန်ုပ်၏အတွေ့အကြုံမှာ ၎င်းကိုရရန်အတွက် ကျွန်ုပ်သည် Firefox နှင့်ထိုက်တန်ကြောင်း သက်သေပြရမည်ဖြစ်သည်။ လူတိုင်းသည် IE တွင် စံနှုန်းများဖြစ်ကြသော်လည်း၊ "စျေးကွက်ရှာဖွေရေး" ပုဂ္ဂိုလ်အတွက် နည်းပညာအနည်းငယ်ကို ကျွန်ုပ်ပြသပြီးနောက်၊ Firefox တွင် ချိတ်ရန် လျှို့ဝှက်ဖိုင်တွဲကို ပြသခဲ့သည်။ ဒါကို လူတိုင်းမှာ ဘာကြောင့် မရှိကြတာလဲ မသိဘူး၊ သူတို့က "လေ့ကျင့်ရေး" နဲ့ မပတ်သက်ချင်ဘူးလို့ ထင်ပါတယ်။ ပြင်ပကနေ ကုမ္ပဏီကို ရောက်လာတော့ FF ကို ဘယ်လိုသုံးရမယ်ဆိုတာ သိထားပြီးသားပါ။
ဇွန်လ 22 ရက် 2012 ခုနှစ် နံနက် 10 နာရီ 52 မိနစ်
Firefox သည် အမှန်တကယ်ပင် အံသြဖွယ်ကောင်းကြောင်း သင်၏ IT ဌာနကို ဆွဲဆောင်နိုင်ရန်၊ ဘရောက်ဆာတွင် လူများကို မည်ကဲ့သို့ အပ်နှံထားကြောင်း ၎င်းတို့ကို ပြသသင့်သည်။ မင်းရဲ့အထောက်အထားက ဒီလိုဖြစ်နိုင်တယ်။ Firefox ဖြတ်တောက်ခြင်း စက်ဝိုင်း. အခြားဘရောက်ဆာများအတွက် ရည်ရွယ်ထားသော သီးနှံအဝိုင်းများကို ကျွန်ုပ်မတွေ့ပါ။